I-10 zeYunivesithi ezingabizi ngexabiso eliphantsi eCanada kwiNkqubo yokuthweswa isidanga kunye nesidanga sokuqala 2022
I-10 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada kwiiNkqubo zeBakala lesiGqeba kunye nezoPhuculo
Nalu uluhlu lwangoku lweeyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi basekhaya nakwamanye amazwe abafuna ukwenza igraduate okanye inkqubo yesidanga sokuqala eCanada.
Ngamaxesha amaninzi usiva ukuba iCanada likhaya labafundi bamanye amazwe, le nto yenziwe ngenxa yezi yunivesithi zibonelela ngeefizi zokufunda eziphantsi kwaye zinamazinga aphezulu okuvunywa kwabafundi bamanye amazwe kunye nokuhlala.
Malunga neeYunivesithi eziFundayo eziseCanada
IiYunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada (iidyunivesithi ezisezantsi eCanada)
IYunivesithi yaseSaint-Boniface, Canada
IYunivesithi yaseCanada yaseMennonite
KwiYunivesithi yeSikhumbuzo saseNewfoundland
IiYunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada kwiiDigital Degrees
Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada kwiiMasters Degrees (Isidanga semfundo ephantsi kwi-Master's degree eCanada)
Yunivesithi yaseNyakatho yeBritish Columbia
Xa ndisithi “iidyunivesithi zemfundo ephantsi” ndibhekisa kwiiyunivesithi ezingabizi kakhulu; Ndisebenzisa ibinzana elithi "ukufundiswa okuphantsi" ukukunceda uqonde ukuba xa ndisithi iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada, ndibhekisa kwizikolo ezikumgangatho ophantsi kunokuba zibhekisa kwizikolo ezinemali yokufunda.
Inye kuphela into ekufuneka uyiqaphele malunga nolu luhlu sendiza kulukhupha ngoku kukuba ezinye zezikolo ezikolu luhlu azikho phakathi kweyona yunivesithi ixhaphakileyo neyaziwayo eCanada kodwa eneneni ziiyunivesithi ezibiza imali yexabiso eliphantsi eCanada .
Imali yesikolo phesheya ihlala ingumba ojamelene nabafundi abafuna ukufundela ngaphandle kwelizwe labo, ngakumbi xa besiya kumazwe anjenge Canada, Ostreliya, China, I-US okanye ezinye iindawo zokufunda ezithandwayo-kwiindawo ezikumazwe aphesheya.
Apha ndaye ndagqiba kwelokuba ndidwelise iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada ngokusekwe kuphando lomntu ukunceda abafundi bamanye amazwe abafuna ukunciphisa iindleko kwimirhumo.
IYunivesithi yaseBrandon kungoku nje yeyona yunivesithi inexabiso eliphantsi eCanada kwiinkqubo zesidanga sokuqala kubo bobabini abafundi baseCanada nakwamanye amazwe.
Iyunivesithi ibonelela ngeenkqubo zesidanga sokuqala kubemi baseCanada kunye nabahlali abasisigxina kwimirhumo yokufunda ephantsi phakathi kwe- $ 1,700 ukuya kwi- $ 4000 ephezulu.
Abafundi bamanye amazwe bahlawula iifizi zokufunda eziphantsi njenge- $ 7,203- $ 7,968 yeenkqubo zesidanga sokuqala kwiYunivesithi yaseBrandon.
Unokufumana ngakumbi malunga Imirhumo yesikolo iBrandon University kunye nokunye kwiwebhusayithi yabo esemthethweni.
Le yenye yeeyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada ezifundisa ikakhulu kulwimi lwesiFrentshi.
Malunga ne-14 yeenkqubo zesidanga sokuqala kule yunivesithi kubandakanya ubuhlengikazi, iTekhnoloji yoLwazi, uLawulo lwezoShishino kunye nezinye izinto ezaziwa njengeyona nkqubo yexabiso eliphantsi eCanada.
IUniversité de Saint-Boniface ihlawulisa imali yokufunda ephantsi yabafundi bamanye amazwe abaqala nge- $ 7,500 kwaye ayidluli kwi- $ 9,000 kuzo zonke iinkqubo zesidanga sokuqala.
Abemi baseCanada kunye nabahlali abasisigxina bonwabela imali ephantsi yokufunda kule yunivesithi ngeenkqubo ezingabizi kakhulu ezibiza iifizi zokufunda eziphantsi njenge- $ 3,000.
Unokufumana ngakumbi malunga Inkqubo epheleleyo yaseUniversité de Saint-Boniface kunye neefizi zokufunda ezihambelanayo kwiwebhusayithi yabo yesikolo esemthethweni.
KwiYunivesithi yase-Alberta yenye yeeyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada enemirhumo yokufunda i- $ 5,000 ukuya kwi- $ 7,000 kubo bobabini abafundi bamanye amazwe nabasekhaya. Ngapha koko, le yeyona yunivesithi ithandwayo iphantsi eCanada njengoko kubonisiwe apha.
Nangona izifundo zakho kunye neefizi zixhomekeke kwinkqubo yakho, uninzi lweenkqubo zesidanga sokuqala kwesi sikolo zifikeleleka kakhulu.
Ngaphandle kwemali yokufunda, kulindeleke ukuba ugcine ecaleni isixa-mali esingaphezulu kwe- $ 5000 yeendleko zakho zobuqu kwizinto ezinje ngempahla, ukutya, ukonwabisa kunye nokunye.
Iyunivesithi iyayikhathalela imali yakho yokuhamba kangangeenyanga ezisi-8 ukusukela ngoSeptemba ukuya kuAprili kodwa kwiinyanga ezine ezishiyekileyo kulindeleke ukuba ukwenze oku epokothweni. Unokufumana ngakumbi malunga Izifundo kunye nezinye iifizi kwiYunivesithi iAlbert kwiwebhusayithi yabo esemthethweni.
Ngelixa kule ndawo, bonisa ukuba ungumfundi waseCanada okanye wamazwe aphesheya ukuze ukwazi ukubona ulwazi olwenzelwe wena.
KwiYunivesithi yaseCanada Mennonite zombini iifizi zezifundo kunye nesicwangciso esipheleleyo sokutya iindleko eziphantsi kwe- $ 7000 kwisemester nganye kunye ne- $ 14000 ngonyaka. Oku kuphakathi kweyona mirhumo yexabiso eliphantsi onokuyifumana naphi na eCanada.
Njengokuba oku kungonelanga, iyunivesithi ibonelela ngezifundo ezininzi kunye nezixhobo zoncedo kubafundi ukuba phantse iipesenti ezingama-50 zabafundi bayo banikwa uncedo lwemali olunye okanye olunye unyaka.
I-CMU ineendlela ezininzi zokukhetha izindlu ngamaxabiso ahlukeneyo onke ekhampasini nangona abafundi bengagunyaziswanga ukuba bahlale kwikhampasi njengoko kufuneka kodwa kuyacetyiswa ukuba abafundi bahlala ekhampasini kwaye iyunivesithi izama konke okusemandleni ukukhuthaza le nkcubeko.
Unokufumana okuninzi malunga iifizi zezifundo kunye nezinye iifizi zokuncoma kwi-CMU kubafundi basekhaya nakwamanye amazwe kwiwebhusayithi yabo esemthethweni.
Ukuba ufuna iiyunivesithi ezifikelelekayo eCanada, iSikhumbuzo seYunivesithi yaseNewfoundland yenye yeeyunivesithi ezibeka uluhlu kuluhlu ngentlawulo yokufunda ephantsi njenge- $ 2,550 yabafundi bamazwe aphesheya.
Kufanelekile ukuba uqaphele ukuba sikhankanye ukuba le yiyunivesithi kuphela apha eyenze ukuba kuludwe lweeyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada kuzo zombini izidanga kunye nezidanga.
Imirhumo yokufunda yabafundi bamanye amazwe apha nangona iphakame kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iiyunivesithi ezikolu luhlu kodwa kwinqaku ngokubanzi, le ntlawulo ifikeleleka kakhulu kwaye ixabiso eliphantsi kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iiyunivesithi zaseCanada ezingaboniswanga kolu luhlu. Abafundi bamanye amazwe apha bahlawuliswa imali yokufunda i- $ 11,460.
Unokufumana ngakumbi malunga nezifundo, Imirhumo yokufunda kunye neminye imirhumo kwiYunivesithi yeSikhumbuzo yaseNewfoundland kwiwebhusayithi esemthethweni yesikolo.
Indawo: UBrandon, Manitoba
Isifundo: $ 7,203
IiNkqubo zeDriki: BA, BBA, BEd, BFA, BM, BN, BSc
Indawo: IWinnipeg, iManitoba
IiNkqubo zeDriki: Isidanga sebhatshela.
IiNkqubo zeDriki: Isidanga sebhatshela
IiNkqubo zeDriki: Iminyaka emithathu kunye nemine ye-BA, i-BSc, i-BBA, kunye neeNkqubo zeMasters.
Indawo: ISt. Johns, eNewfoundland
IiNkqubo zeDriki: Isidanga sokuqala kunye neeMasters.
PHAWULA: Imirhumo engentla yenzelwe ikakhulu iinkqubo zesidanga sokuqala kwezi zikolo hayi i-Master's. Sikwenzile ukuba kufumaneke uluhlu lweyona digri yexabiso eliphantsi eCanada apha ngezantsi eya kuba luncedo kakhulu kwabo baya kwinkqubo ye-Master.
Iiyunivesithi ezingezantsi zibonelela ngeenkqubo zePostgraduate ezingabizi kakhulu eCanada kubandakanya isidanga se-Master, uGqirha kunye noPosti kodwa ke iifizi ezidweliswe apha ngezantsi zisisiseko senkqubo ye-Master.
Iiyunivesithi zesidanga semasters esinexabiso eliphantsi eCanada
Isifundo: $ 3,222
Indawo: INkosana uGeorge, eBritish Columbia
Indawo: ICalgary, Alberta
Indawo: IBurnaby, kwiBritish Columbia
Indawo: ISaskatoon, eSaskatchewan
ISikhumbuzo iYunivesithi yaseNewfoundland enemirhumo yokufunda ngenkqubo yemasters eqala ukusukela ezantsi njenge- $ 3000 ikwindawo eSt. Johns yenye yeendawo ezinamaxabiso aphantsi ukuhlala eCanada.
Iyunivesithi ineentlobo ngeentlobo ze Iinkqubo zeMasters kunye nezeGqirha bobabini ekumntu nakwi-Intanethi, kwicandelo lezoBuntu kunye nezeNzululwazi ngezeNtlalo, iiNkqubo zezoBuchule, iiNkqubo eziDibeneyo, kunye neeSayensi.
Ngomrhumo wemfundo ye-masters degree esezantsi njenge- $ 3,000 kwiDyunivesithi yaseMntla yeBritish Columbia, iyunivesithi ikuluhlu phakathi kwezona yunivesithi zibiza kakhulu eCanada zivuma abafundi baseCanada nabangaphandle.
Nangona iifizi zokufunda ziphononongwa kwaye ngamanye amaxesha zihlaziywa minyaka le kwesi sikolo, ungasoloko ufumanisa ukuba yintoni etshintshileyo okanye hayi evela iphepha leprogramu esemthethweni kwiwebhusayithi yabo yesikolo.
Iyunivesithi ibonelela ngeedigri zokuthweswa isidanga kunye neenkqubo zesatifikethi kubandakanya i-MBA, i-MSc, i-MEd, i-MEng, i-MScN, i-MSW, iZatifikethi zeZidanga, kunye neenkqubo zobugqirha zonke ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Ngomrhumo ophantsi kakhulu wokufunda oqala ngokufanelekileyo ngaphezulu kwe- $ 3,500 yeenkqubo zesidanga sokuqala kunye neenkqubo ezahlukeneyo zesidanga semasters, iYunivesithi yaseCalgary ngebhongo yenye yezona yunivesithi zibiza ixabiso eliphantsi eCanada kwizidanga zokuthweswa izidanga eziqala ikakhulu kwizidanga zemasters.
Isikolo sibonelela ngokusekwe kwikhosi kwaye I-Master's esekwe kuphando kunye needigri zobugqirha kwizifundo ezahlukeneyo ezinqamleza iinkalo ezahlukeneyo zokufunda.
Nangona enye yeyunivesithi eyaziwayo eCanada, University of Simon Fraser isasebenza njengenye yeeyunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada kwinkqubo yeenkosi.
Iyunivesithi ihlawulisa imali yokufunda ephantsi kakhulu enokuhlala kakuhle kwiipokotho zabafundi bamanye amazwe.
Inkqubo ye-Master kwiYunivesithi yaseSimon Fraser iqala kwimirhumo yokufunda iphantsi njenge- $ 3,743 kodwa iyahluka kancinci kwiinkqubo. I-SFU ngokungathandabuzekiyo ineenkqubo ezizezona zibiza ixabiso eliphantsi eCanada iphela.
Iyunivesithi ine ezahlukeneyo zeenkqubo zokuthweswa izidanga ukusika kuwo onke amabakala eeSayensi eziSebenzisiweyo, ubuGcisa kunye nezeNzululwazi ngezeNtlalo, iShishini, uNxibelelwano, ubuGcisa neTekhnoloji, iMfundo, iNdalo, iSayensi yezeMpilo, kunye neNzululwazi.
Ngomrhumo wemfundo yokufumana isidanga sokuqala ukusuka kwinqanaba eliphantsi njenge- $ 4,358, iYunivesithi yaseSaskatchewan yeyona yunivesithi inexabiso eliphantsi eCanada kwiinkqubo zesidanga sokuqala.
Iyunivesithi inezidanga ezingaphezu kwe-80 zeMasters kunye nezeDokotela. Ingcali kuphando kunye necandelo lezonyango.
Ubungcali beeScholarships ezigqibeleleyo kwiCanada
Izikolo eCanada nge-IELTS Exemption
Iikhosi zasimahla kwi-Intanethi eCanada zabo bonke abafundi
Ufunda njani eCanada ngaphandle kwe-IELTS
Isidanga seMasters simahla kwi-Intanethi esineZatifikethi
IiYunivesithi eziFundayo eziNcinci Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo
KhanadaIiyunivesithi zaseCanadaiinkosi ezingabizi kakhulu eCanadaesona sitishi sitshiphu eCanadaIxabiso eliphantsi kwiiyunivesithiiikholejiABAFUNDI BAMAZIKOephantsiisidanga seemasters ezisezantsi eCanadaiidyunivesithi eziphantsi eCanadaImirhumo yokufunda ephantsiFUNDA KWELINYE ILIZWEkufunda e Canadaphezulu 10kwiiyunivesithi
Post Previous:Izifundo zeYunivesithi zasimahla eOstreliya zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Okulandelayo Post:Iiyunivesithi zaseOstreliya ngaphandle kweNtlawulo yokufaka isicelo sabaFundi beZizwe
January 15, 2022 apha 10: 31 pm
Molo ndinguThelma ndifuna umsebenzi kunye nokufunda e-canabade kwi-cholarship nokuba ziinkosi kwintengiso kunye nonxibelelwano lwentengiso okanye idigri yokubhaka kunye ne-pastry pls unganceda njani enkosi
Oluwabunmi ajayi uthi:
Juni 25, 2021 kwi-8: 50
Ndifuna iinkcukacha zokwenza isicelo senkqubo yam yeenkosi eCanada okanye eGeorgia e-USA enkosi ngokulindela
Juni 1, 2021 kwi-5: 45
Ngaba abantu bamanye amazwe banokufumana i-visa yaseCanada ngoku, phantsi kwe-covid-19, kwimvume engaphantsi kweenyanga ezi-6 (eneneni i-3 inyanga)?
Ukuba kunjalo, ungandinika iinkcukacha?
Agasti 18, 2021 kwi 12: 57 pm
Ukuba ufaka isicelo sesifundo esingaphantsi kweenyanga ezi-6 zobude. Awuyi kufumana i-visa yokufunda iya kubalwa kwi-visa yeendwendwe onokufunda kuyo.
NgoSeptemba 24, 2020 kwi-3: 06 pm
Ndivela ePortugal naseAngola kwaye ndingathanda ukufumana isolarship epheleleyo yesayensi yeKhompyuter ndiligqibile ibanga le-11 kwisikolo esiphakamileyo kwaye ndafumana ngaphezulu kwezatifikethi ze-IT ze-15.
Ogundele boluwatife uthi:
Septemba 24, 2020 kwi 11: 39 am
Ndivela eNigeria, ndifuna ukwamkelwa nakweyiphi na iyunivesithi
NgoSeptemba 29, 2020 kwi-2: 09 pm
Ngalo lonke ixesha jonga kwaye ufake isicelo samathuba okubhalisela ukuhlangabezana neemfuno zokufaneleka
UMuhammad kudrat-E-Khuda uthi:
NgoSeptemba 3, 2020 kwi-3: 10 pm
Oku kudrat e khuda kwaye ndivela eBangladesh. Ndinesidanga esinye seBachelor, isidanga se-2 semasters kuLwimi lwesiNgesi kunye ne-TESOL kunye nesidanga esinye semfundo. Ngoku ndingutitshala oqeqeshiweyo wesiNgesi kwikholeji. Okwangoku ndifuna ukuba nesinye isidanga semasters esinxulumene neenkalo zam ezinje ngesiNgesi okanye imfundo evela eCanada. Ngaba ungandicebisa ukuba ndenze ntoni ukuze ndifumane isidanga sam semasters esilandelayo?
Ilinde impendulo yakho.
NgoSeptemba 3, 2020 kwi-1: 03 pm
Ndifuna ukufunda ndisebenze eCanada ukuba unganceda uku-imeyile: sagbhu.123@gmail.com enkosi!
Ayoub shah uthi:
NgoSeptemba 1, 2020 kwi-5: 42 pm
Ndinomdla wokufunda kwi-canda… .enye ingandinceda… kwaye umntu andikhokele plzzzz…
Inombolo yam ye-WhatsApp 03329141370… uncedo lwe-plz… ndivela ePakistan…
NgoSeptemba 1, 2020 kwi-3: 33 pm
Molo ndifuna ukwenza i-PHD yam kwizifundi eCanada. Ingenzeka ?
Julayi 12, 2020 kwi-5: 56 am
Nceda undithumelele iinkqubo ezintsha
USimrat kaur uthi:
Meyi 12, 2020 kwi-4: 06 pm
hii, ndingumfundi waseIndiya kwaye ndifuna ukuba ngusokhemesti eCanada.Ngaba ungandicebisa ngeeyunivesithi ezingabizi kakhulu koku.
aderogba jamiu ayinde uthi:
Juni 19, 2019 kwi-9: 23 pm
Molo ndinomdla omkhulu wokufunda phesheya ngeefizi zesikolo ezisezantsi kunye neso sikolo. I-Simon fraser yunivesithi ndihamba njani ngayo kwaye ndingasebenza kwaye ndifunde esikolweni kwangaxeshanye ndicela impendulo enkosi.
Humaiz Jamil uthi:
NgoSeptemba 2, 2020 kwi-8: 51 pm
Ndingathanda ukufaka i-visa yokufunda eCanada okanye e-Australia
UGamaliyeli uJean Hilaire uthi:
Oktobha 8, 2021 kwi-2: 20 pm
Ndingumfundi wamazwe ngamazwe, ndingathanda ukufumana i-scolarship epheleleyo yokufunda eCanada okanye e-USA.
U-Mohammad Daryosh uthi:
Meyi 24, 2019 kwi-10: 45
Ndinomdla wokuba neli nqanaba lokufunda phesheya.